अनामनगरमा पुराना कपडा स्टल, जहा सित्तैमा दिन नि पाईन्छ अनि लिन पनि- 100'S ग्रुप - OpticalKhabar
होमपेज मुख्य समाचार अनामनगरमा पुराना कपडा स्टल, जहा सित्तैमा दिन नि पाईन्छ अनि लिन पनि- 100'S ग्रुप
अनामनगरमा पुराना कपडा स्टल, जहा सित्तैमा दिन नि पाईन्छ अनि लिन पनि- 100'S ग्रुप
DoroNepal Reporter 10:24 AM मुख्य समाचार,
अनामनगर, हनुमानस्थानबाट सिंहदरबार पूर्वी गेट कटेर अगाडि बढ्दै जाँदा दायाँपट्टि ठूलो बरको रूख आउँछ।
तीन दिनअघिसम्म यहाँ खासै चहलपहल हुन्थेन। तर गत मंगलबारदेखि यहाँ मान्छेको घुइँचो नै लाग्न थालेको छ। एक्कासि यो चहलपहल बढाउने काम 'हन्ड्रेड्स ग्रुप' नामक युवाहरूको समूहले गरेको हो।
उनीहरूले रूखको फेदमुनि सरसफाइ गरे। एउटा ठूलो र्‍याक राखे। र्‍याकमा छानो हाले। यो देख्नेहरूलाई सुरूमा 'यी केटाहरू के गर्दैछन्' भन्ने पनि लाग्यो। जब समूहले आफ्नो काम पूरा गर्यो, देख्नेहरू दंग परे।
समूहले त्यो ठूलो र्‍याकमा लुगाफाटा झुन्ड्यायो। जुत्ताहरू सजायो। गुडियादेखि झोलासम्म राख्यो। पुराना तर लगाउन र प्रयोग गर्न मिल्ने सामानहरू संकलन गरेर उनीहरूले 'कपडा बैंक' सञ्चालनमा ल्याए। यो बैंकमा पैसामा कारोबार हुँदैन, लेनदेन सित्तैमा हुन्छ।
सडक किनारैमा रहेको यो नौलो अभियानले धेरैलाई आकर्षित गर्यो। सामान दिन चाहनेले सहज ठाउँ देखे, राम्रो काम भन्नेले सरहाना गरे।
सबभन्दा खुसी ती भए जसले यहाँबाट सामान लैजान पाए। आफूलाई आवश्यक परेका तर किन्न नसकेका जुत्ता र लुगा सित्तैमा पाउँदा को खुसी नहोला!
जो कोहीले पनि कपडा-सामान ल्याएर दिनसक्ने भएकाले यो अभियानले सडकमा बस्ने असहाय, असक्त तथा आर्थिक अवस्था न्यून भएका व्यक्तिहरूलाई मौसमअनुसार कपडा उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने समूहका सदस्य विमल पन्त बताउँछन्।
'सहरमा धेरै मान्छे छन् जसले एउटै लुगा वर्षौंसम्म वा धेरै पटक नै लगाउँदैनन्। नच्यातिएका र लगाउन मिल्ने लुगा हामीले फोहोरको थुप्रोमा फालिएको देखेका छौं,' विमलले भने, 'हामीले त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर सामाजिक काममा परिचालन गरेका हौं।'
हन्ड्रेड्स ग्रुपले नवजीवन परोपकार समाजको सहयोगमा 'कपडा बैंक' अभियान सुरू गरेको हो। आफैंले लगाइराखेका एक–दुई जोर कपडाबाट सुरू गरेको अभियानले अहिले 'कपडा बैंक'को रूप लिएकोमा विमल हर्षित देखिए।
तीन दिनअघि मात्रै सञ्चालनमा आए पनि यहाँबाट सयभन्दा बढी मान्छेले आवश्यकता अनुरुप कपडा र सामान लिएर गएको विमल बताउँछन्। यसले समाजसेवाका साथै फोहोर व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास समूहको छ।
'हाम्रो त परिवार छ। कमाएर लगाउन पनि सक्छौं। समाजमा असक्त, असहाय पनि छन् जसको कोही छैन। उनीहरूका लागि हामी छौं भन्ने महशुस गराउन अभियानमा लागेका हौं,' उनले थपे।
कतिपय मान्छेलाई आफूलाई प्रयोग नहुने सकुशलै सामान पनि यसै थन्क्याएर राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कसैलाई दिइहाल्ने अवस्था पनि जुर्दैन। पुराना सामान दिन र लिन मान्छे हिचकिचाउँछन् पनि। यस्तो अवस्थामा समूहको यो अभियान सामान लिने‍‍-दिने दुवैलाई सहयोगी हुन्छ।
यस्तो आइडिया यो समूहलाई कसरी फुर्यो त?
केही दिनअघि भारतको एउटा तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। तस्बिरमा एक वृद्ध मध्यचोकमा अडिएको र्‍याकबाट कपडा झिक्दै थिए। त्यही तस्बिर देखेपछि आफूहरूले पनि अभियान थालेको विमलले बताए।
'हामीले यसरी कपडा बैंकका रूपमा काम नगरे पनि पहिल्यैदेखि सामाजिक कामहरू गर्दै आएका थियौं,' उनले भने, 'त्यो फोटो देखेपछि प्रभावित भयौं। लगत्तै काम पनि सुरु भयो।'
समूहले स्थानीय, वडा र सामाजिक सञ्जालमा समेत राम्रो साथ पाएको उनले बताए। त्यस्तै सामाजिक कामका निम्ति समूहले विभिन्न ठाउँबाट आर्थिक सहयोग पनि पाइरहेको छ।
'हन्ड्रेड्स ग्रुप' नाम चाहिँ कसरी रह्यो? यसमा पनि उनीहरूको तर्क रोचक छ।
'हामी सुरक्षा र अन्य आपतकालीन अवस्थामा १०० डायल गरेर प्रहरीसँग समन्वय गर्छौं। त्यस्तै कपडा आवश्यक परे हामी छौं भनेर बुझाउन यो नाम राखेका हौं,' विमलले जानकारी दिए।
बाढी, पहिरो, आगलागी पीडितलाई पनि यस्तो सहयोग प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ।
भन्छन् 'बाढीले घरबारै बगाएको, आगोले खरानी बनाएको, जाडोले कठ्यांग्रिन परेको अवस्थामा एक जोडी न्यानो लुगा पाए कत्रो राहत मिल्थ्यो होला!'
अनामनगरको अभियानले सफल रुप लिए अन्य स्थानमा समेत 'कपडा बैंक' स्थापना गर्ने योजनामा छ हन्ड्रेड्स ग्रुप।
यस किसिमको अभियान देशैभर आवश्यक रहेको बताउँदै विमल भन्छन् 'हामी अगाडि बढिरहेका छौं, हेरौं कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ।'
लगाउन र प्रयोग गर्न मिल्ने कपडा, जुत्ताचप्पल, झोला लगायत सामान दिन इच्छुक हुनेले समूहसँग सम्पर्क गर्न सक्ने विमल बताउँछन्। अनामनगरमै लगेर राखिदिन पनि सकिन्छ।
'कसलाई यस्ता लुगा वा जुत्ता-चप्पल आवश्यक भएको देख्नेहरूले पनि हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ,' उनले भने।
Posted by DoroNepal Reporter at 10:24 AM